त्रिशूली जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिने सोमवार अन्तिम दिन | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर त्रिशूली जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिने सोमवार अन्तिम दिन
on: ११ चैत्र २०७५, सोमबार ११:४८ मुख्य खबर, लगानी
आइतवारसम्म करीब १० गुणा बढी आवेदन
चैत ११, काठमाडौं (अस) । चैत ७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि विक्री खुला भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ भर्ने सोमवार अन्तिम दिन रहेको छ । आइतावारसम्म तोकेभन्दा बढी आवेदन परिसकेकाले छोटो अवधिमै विक्री बन्द हुन लागेको हो । विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमइ क्यापिटलका अनुसार आइतवारसम्म ७७ हजार ६१६ जना आवेदकले ३ करोड ४५ लाख ३६ हजार ८९० कित्ता शेयर खरीदको माग गर्दै आवेदन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसमेत लगानी रहेको यस आईपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी देखिएको छ । दोस्रो बजारमा धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेकाले प्राथमिक बजारमा जलविद्युतको शेयर विक्री हुन हम्मेहम्मे परेको अवस्था थियो । तर, सरकारी लगानीको यस आयोजनाबाट आफ्नो लगानी असुरक्षित नहुने अपेक्षाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित भएको देखिन्छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी : हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयरधनी’ नाराका साथ आईपीओ विक्री गर्ने यो पहिलो आयोजना हो । आयोजनाले कुल ३७ लाख ५ हजार कित्ता आईपीओ जारी गरेको हो । कुल कित्तामध्ये कर्मचारीका लागि १ लाख ११ हजार १५० कित्ता संरक्षण गरी बाँकी ३५ लाख ९३ हजार ८५० कित्ता सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको हो ।
प्रतिशेयर अंकित मूल्य रू. १०० भए पनि यस कम्पनीको आईपीओ पहिलो चरणमा १० प्रतिशत मात्र लगानी गरेर शेयर खरीद गर्न पाइने व्यवस्था छ । बाँकी रकम भने आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
यो आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा सेवाको अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट न्यूनतम १ सय कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ताका लागि आवेदन गर्न सकिनेछ ।
३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो आयोजना नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा पर्दछ । आयोजना लागत प्रतिमेगावाट रू. २२ करोड २३ लाख ६३ हजार रहने अनुमान छ ।
हाल रू. १ अर्ब ४८ करोड २० लाख चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारीपछि रू. १ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ५० हजार पुग्नेछ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९१ दशमलव १४ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले रू. ९३ दशमलव ४९ प्रतिशेयर नेटवर्थ पु¥याउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
१४ चैत्र २०७५, बिहीबार १३:२६
त्रिशूली जलविद्युतको आईपीओमा ५ गुणा बढी आवेदन, चैत ११ मै बन्द हुने
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १५:५५